काठमाडौँ । अखिल नेपाल महिला सङ्घको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति सरेको छ । यस अघि अनेमसङ्घले २०७५ फागुन २४,२५ र २६ गते रूपन्देहीको बुटवलमा सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । तर २०७५ पौष १७ र १८ गते नवलपुरको गैडाकोटमा सम्पन्न अनेमसङ्घ केन्द्रीय समितिको सचिवालय बैठकले सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति सार्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठक पश्चात् अध्यक्ष मिना पुनले जारी गर्नु भएको प्रेस वक्तव्यमा जनाइए अनुसार अनेमसङ्घको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन अब २०७६ मंसिर महिनामा हुनेछ । सम्मेलनको ठोस दिन भने आगामी वैशाख महिनामा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले तय गर्नेछ । सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै बैठकले जिल्ला भेला तथा सम्मेलनका ठोस कार्यक्रमहरू पनि तय गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्ष मिना पुनद्वारा २०७५ पौष २३ गते जारी उक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–“अखिल नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय समितिको सचिवालयको बैठक २०७५ पौष १७ र १८ गते बस्यो । बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. अखिल नेपाल महिला सङ्घको ७ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन २०७५ फागुन २४,२५ र २६ गते बुटवलमा गर्ने निर्णय भएको थियो । हाललाई सम्मेलन सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी पूरा नभएको कारण उक्त सम्मेलन २०७६ मंसिरमा गर्ने निर्णय भएको छ । सम्मेलनको मिति आगामी वैशाखमा पोखरामा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले तय गर्नेछ ।
२. २०७५ माघ, फागुन र चैत्र महिनासम्ममा सबै जिल्लाका सम्मेलन र भेला सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । केही जिल्लाहरूका जिल्ला सम्मेलन र भेला गर्ने मिति तय गरिएको छ । सम्मेलन हुने जिल्लाहरू रूपन्देही फाल्गुन २४ गते, फागुन २ र ३ गते , बागलुङ फागुन १८ गते, अर्घाखाँची फागुन २४ गते, बाँके माघ १० गते, कपिलवस्तु माघ १२ गते, कास्की फागुन ४ गते, गुल्मी फागुन ११ गते, नवलपुर माघ १९ गते, पाल्पा फागुन ३० गते, काठमाडौँ फागुन २४ गते, पर्वत फागुन २५ गते, कैलाली फागुन १८ गते, म्याग्दी फागुन ११ गते, ललितपुर माघ १९ गते (भेला), भक्तपुर माघ २६ गते (भेला), तनहुँ माघ २६ गते (भेला)
मिति तय नभएका जिल्लाहरूको हकमा केन्द्रीय कार्यालयले जिल्लासँग समन्वय गरेर तय गरिने छ ।”